Falanqaynta Kulanka Borussia Moenchengladbach Vs Manchester City Ee Champions League
HomeChampions LeagueFalanqaynta Kulanka Borussia Moenchengladbach Vs Manchester City ee Champions League
February 24, 2021 Champions League, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Hogaamiyaasha Premier League ayaa wajihi doona kooxda Jarmalka ee Borussia Monchengladbach lugta hore ee wareega 16-ka ee ka dhacaya Budapest, Hungary,
Garoonka Gewiss Stadium
Borussia Monchengladbach:- Borussia Monchengladbach ayaan qabin wax walwal ah oo dhaawacyo ah kulankaan waana inay magacaabaan kooxdooda ugu xoogan. Marcus Thuram ayaa kursiga keydka fadhiyey Bundesliga dhamaadkii usbuucan waxaana loo badinayaa inuu ku soo bilaaban doono kulankaan.
Manchester City:- Nathan Ake ayaa haatan ka soo kabsanaya dhaawac muddo dheer soo gaaray, waxaana la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono toddobaadyada soo socda. Phil Foden iyo Rodri kuma soo bilaaban kulankii Arsenal ee usbuucan waxaana loo badinayaa inay ku soo bilaaban doonaan kulanka Borussia Monchengladbach.
Manchester City ayaa rikoor fiican ka heysata Borussia Monchengladbach waxayna guuleysatay seddex kulan oo ka mid ah afartii kulan ee ay ka horyimaadeen kooxda Jarmalka.
Borussia Monchengladbach ayaan waligeed ka adkaan Manchester City kulan rasmi ah oo ka tirsan tartamada yurub waxayna u baahan tahay inay kulankaan kor u qaado.
Kulankii hore ee labadan koox wuxuu ka dhacay UEFA Champions League sanadkii 2016 wuxuuna ku dhamaaday barbaro 1-1.
Borussia Monchengladbach waxay soo bandhigtay ciyaar adag kulankaasi waxayna dooneysaa inay sameyso dadaal lamid ah isbuucaan.